बेइजिङमा छैन वायु प्रदूषण, कसरी ?-CRI
बेइजिङमा छैन वायु प्रदूषण, कसरी ?
हिउँद ऋतुसँगै काठमाडौँलगायत नेपालका विभिन्न सहरहरूमा वायु प्रदूषणको मात्रा बढेको छ। यसैको सेरोफेरोमा गत साता विशेषत काठमाडौँले विश्वका सहरहरूमा सबैभन्दा प्रदूषित हावाको सूचीमा पहिलो स्थान नै ओगट्यो। यसैकारण काठमाडौँ सहर नम्बर एकको हल्लाले नेपालीबीच तहल्का नै पिटेको थियो। आखिर विश्‍वका सहरबीच केहीमा त नम्बर एक बनेको थियो। तर सघन र गहन रूपमा केलाउने हो भने असंख्य मुद्दामा काठमाडौँले धेरै सहरलाई पछाडि पार्ने छ।
यस्ता विविध सर्भेक्षण भइरहनु पर्छ। यस्ता सर्भेक्षणबाट बाहिरिने नतिजाबाट धेरै अपत्यारिला कुरा प्रकट हुने छन्। र त सबैको ध्यानाकर्षण हुने छ। तर भइरहेका यस्ता सर्भेक्षणहरूप्रति विषयगत विद्यार्थी, अध्येता, विद्वानको खतरासूचक चेतावनीलाई आमजनतादेखि सरकारद्वारा हल्का रूपमा लिइएको देखिन्छ।
विषाक्त वायुको सहरमा काठमाडौँ नम्बर एकमा देखिएपछि झस्किनुपर्ने हो तर सहर बिन्दास छ। जसरी अघिल्ला वर्षहरूका यस्ता तथ्यांकलाई नजरअन्दाज गरिदिएको थियो। त्यसमाथि गरिबी रेखामुनीका जनताले झन् के पो गरोस्।
अहिले हिउँदको महिना, त्यसमाथि काठमाडौँ उपत्यकामा तापक्रमले ओरालो लाग्दै नयाँ किर्तिमान बनाउने छाँट नि देखिन्छ। यता चीनमा पनि उत्तर, पूर्व र मध्य भागमा न्यून तापक्रमले २०, ३० वर्षअघिको रेकर्ड नै तोडेको छ। यस्तै जाडो भए पनि उत्तरपूर्वी चीनमा हिटिङ प्रणालीको व्यवस्थाका कारण घरभित्र खप्‍नै नसक्ने त्यो चिसोले छुन पाउँदैन। तर यो हिटिङ प्रणालीका लागि कोइलाको खपत हुँदैआएकोमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरिएको छ। यसैले बेइजिङमा हिउँदमा वायु प्रदूषण निकै कम भएको छ।
काठमाडौँमा वायु प्रदूषण भयावह बन्दै गएको दिन नै अर्थात् जनवरी ४ तारिख बेइजिङको पर्यावरणीय ब्युरोले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनमा ब्युरोको अनुगमन केन्द्रका निर्देशक लिऊ पाओस्येनले सन् २०२० मा बेइजिङको पिएम २.५ औसत रूपमा ३८ माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर रहेको बताए। उनका अनुसार यो सन् २०१३ यता कै न्यून हो। साथै बेइजिङले सोही वर्षदेखि वायु प्रदूषण तथ्यांक संकलन थालेको थियो।
सन् २०२० को ३६५ दिनमा बेइजिङले २७६ दिन स्वच्छ श्वास फेर्न पाएको थियो भने मात्र १० दिन गम्भिर वायु प्रदूषणको समाना गर्नुपरेको थियो। सन् २०१९ को तुलनामा बेइजिङले ३६ दिन बढी निलो आकाश पाएको थियो। यसै गरी सन् २०१३ को तुलनामा ४८ दिन कम गम्भिर वायु प्रदूषणको सामना गरेको थियो। ब्युरोका अनुसार, २०१३ को तुलनामा गत साल बेइजिङको पिएम २.५ को सघनता ५७.५ प्रतिशतले घटेको छ।
चीनले ७ वर्षभित्रै अर्को कमाल गरेर देखाएको छ। केही वर्षअघिसम्म बेइजिङसँगै चीनका धेरै सहरहरू वायु प्रदूषणको विश्व सूचीमा अग्रस्थानमा आउँथे। बेइजिङवासीले हिउँदमा मात्रै होइन ग्रीष्ममा पनि कमै निलो आकाश देख्‍न पाउँथे। अहिले यस्तो अवस्थाबाट मुक्त भएको छ। केही वर्षभित्रै समस्याको पहिचान, समस्या स्रोतको निरोध, आवश्यक स्रोतको प्रतिस्थापन, परिवर्तन, वातावरण अनुकुल समन्वय, समायोजन गर्दै चीनले तरक्की गरेको छ। चीनले कोइलाको प्रयोगमा सिमितता र क्रमिक रूपमा विस्थापनको नीति, औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रमा नवप्रविधि तथा वातावरण मैत्री प्रविधि भित्र्याउने नीति, वातावरण मैत्री सवारी साधनको प्रयोगमा जोड र सहुलियतको नीति अवलम्बन गरेको छ।
नेपाल र विशेषत काठमाडौँ धेरै वर्षअघिदेखि विश्‍वकै एक प्रदूषित सहरको रूपमा सूचीबध्द हुँदैआइरहेको सर्वविदितै छ। झन् सन् २०२१ को पहिलो मङ्गलबार त काठमाडौँ विश्‍वका प्रदूषित सहरमा एक्यूआई वायु गुणस्तर सचकाङ्कमा ४३७ अङ्कसहित पहिलो नम्बरमै आयो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को वायु गुणस्तर मापन सूचकाङ्कको मानक स्तर २५ रहेको छ। डब्लूएचओका अनुसार प्रदूषणको कणको औसत सघनता जसलाई पिएम २.५ भनिन्छ, यसको मात्रा हावामा २५ माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर या एक व्यासमा २.५ माइक्रोन भन्दा बढी हुनुहुँदैन। यो अति नै सूक्ष्म र घातक हुन्छ।
यसको मात्रा १०० माइक्रोग्राम भए वातावरण प्रदूषित बन्छ र ३०० नाघ्यो भने सम्पूर्ण प्राणीलाई नै घातकसिद्ध हुन्छ। ३०० एक्यूआई नाघेपछि जनस्वास्थ्य सङ्कट घोषणा गर्दै बालबालिका, रोगी तथा वृद्धवृद्धालाई बाहिर जान रोक लगाउनुका साथै विद्यालय, कार्यालय जाने तथा अरू बाहिरी काम ठप्प गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल सरकारले मानक स्तर ४० माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर तोकेको देखिन्छ। पिएम १० को मात्रा १ सय २० माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर निर्धारण गरेको छ। साथै वि.स. २०७६ माघ ३ गते बसेको मन्त्री परिषद्‍ बैठकले काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार एक्यूआई ३०० भन्दा बढी भए विपद्‌को रुपमा लिने निर्णय गरेको थियो।
चीनले भने आफ्नो वायु गुणस्तर मानक स्तर ३५ माइक्रोग्राम तोकेको छ। हाल चीनले ठाउँठाउँमा वायु प्रदूषण मनिटर यूनिट स्थापना गर्नुबाहेक प्रदूषणको मात्रा अनुसार अलर्ट जारी समेत गर्दैआएको छ जसबाट आमजनतालाई सचेत गराउनुका साथै प्रदूषणमुक्त वातावरण बनाउन सहभागी गराइएको छ।
सन् २०१३ मा वायु प्रदूषणका लागि आकस्मिक प्रतिक्रिया लागू गरेपछि पैचिङले पहिलो पल्ट सन् २०१५ डिसम्बर ७ तारिखदेखि ९ तारिखसम्म रेड अलर्ट जारी गरेको थियो। रेड अलर्टसँगै पैचिङ शिक्षा आयोगले तीन दिनका लागि प्राथमिक तथा माध्यामिक तहको विद्यालय बन्द गरेको थियो। बाह्य गतिविधिसँग सम्बन्धित कामहरू धेरै मात्रामा स्थगन गरेको थियो। त्यसै गरी जोड बेजोड गाडी सञ्चालनसँगै यस समयावधिका लागि पैचिङसहित वरपरका सहरका २१ हजार वटा वातावरण ह्रास ल्याउने उच्च वायु प्रदूषक उद्योग तथा ३५ सय वटा निर्माण-स्थलहरू बन्द गराएको थियो। सन् २०१३ मा चीनले प्रदूषणबाट मुक्ति पाउनका लागि "प्रदूषणविरुद्ध युद्ध" योजना अघि सारेको थियो।
सन् २०१४ फेब्रवरीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेइजिङ सहरको भ्रमण गर्दै पिएम २.५ तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निर्देशन नै दिएका थिए। बेइजिङमा मुख्यत पिएम २.५ को समस्या थियो र यसको स्रोतको व्यवस्थापनका लागि कोइला खपतमा कमी ल्याउनु, पेट्रोल, डिजेलका सवारी साधनको विस्थापन तथा वायु प्रदूषक उद्योगलाई वातानुकूल बनाउने या सार्ने उपायहरू हुन्। प्रदूषण नियन्त्रण गर्न बेइजिङले सात सय वटा गाउँमा कोइलाको साटो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतको प्रयोग तथा उद्योगहरूमा अनुकूल उपाय तथा यन्त्रको जडान र उद्योगलाई बेइजिङबाट अन्यत्र सार्ने काम गरेको थियो।
गत वर्ष मात्र सहरको वायु प्रदूषित गर्ने खालका ११३ वटा कम्पनीलाई अन्यत्र सारिएको थियो। हाल बेइजिङ सहरसँग ४ लाख बढी नव ऊर्जा सवारी साधन छन्, जसमध्ये अधिकाँश विद्युतीय गाडीहरू छन्। यसै गरी बेइजिङ तथा समग्र चीनलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने क्रममा तेह्रौं पञ्च वर्षीय योजना (२०१६-२०२०) ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
सो क्रममा चीनले बनाएको स्पष्ट नीति, सम्बन्धित विभागको प्रभावकारी भूमिका र बेइजिङवासीको समर्थनबाट धेरै वर्षको प्रयासपछि उपलब्धि हासिल भएको छ। साथै चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक विकासमा फड्को मारेसँगै चीनसँगै विश्वभर स्वच्छ वातावरणका लागि वकालत पनि गर्दैआएको छ। साथै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले १२ औं ब्रिक्स सम्मेलनमा चीनले सन् २०६० सम्ममा कार्बोन उत्सर्जनमा तटस्थता प्राप्त गर्ने बचनलाई निभाउने बताएका थिए।
चीनले यी विविध कदमहरू चालेर ६, ७ वर्षको हाराहारीमा आफ्ना अति प्रदूषित सहरहरूलाई स्वच्छ सहरमा रूपान्तरण गरेको छ। धूलोमाण्डु र हिलोमाण्डुको संज्ञा पाएको काठमाडौँले आजैबाट चीनले अपनाएका केही उपायहरू मात्र अवलम्बन गर्ने हो भने पनि आफ्नो स्वरूपमा आउन समय लाग्दैन। हुन त दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपत्यकाको बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले साझा यातायातद्वारा सञ्‍चालनमा ल्याइएका केही विद्युतीय बसको उद्घाटन पनि गरेका थिए।
सरकारले विद्युतीय बसलाई प्राथमिकताका साथै प्रोत्साहन गर्ने भनेको पनि थियो तर त्यसै बेला नै चार्जिङ स्टेसनको अभाव अर्थात् भौतिक पूर्वाधार तथा योजनाको कमी स्पष्ट देखिन्थ्यो। यस बाहेक सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि कर पनि असुल्दै आएको छ। सरकारसँग योजना छ तर जनताले अनुभूत हुने गरी उपलब्धि प्राप्त गरेका छैनन्।
यसै बीच काठमाडौँको अर्को समस्या अव्यवस्थित रहनु हो र मानिसको चाप थेग्‍ने पूर्वाधारको अभाव हो। देश संघीयतामा गए तापनि यसप्रति अभ्यस्त नहुँदा काठमाडौँमा जनघनत्व दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ। कचौरा आकारको काठमाडौँमा हावा नचल्दा वातावरणमा रहिरहेका प्रदूषणले विकराल रूप लिने गरेको विज्ञको भनाइ छ।
यस कारण केही मात्राको प्रदूषणले पनि हिउँदमा मानिसहरूका लागि विकराल समस्या निम्त्याउने गरेको छ। यो वायु प्रदूषणले मानिसको स्वास्थ्यमा ठूलै समस्या निम्त्याउने भएकोले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई भेट्ने हो भने यस्ता प्रदूषणको अन्त पहिलो सर्त हो। वातावरण मैत्री प्रविधि तथा नीति अपनाएर अघि बढ्ने हो भने आमनेपालीबाट समृध्दि टाढा रहन्‍न।
(सर्वप्रथम इकागजमा पुस २६, २०७७ मा प्रकाशित)